I-replica Iingxowa, Iibhola : UkuPhakanyiswa (-55%)
Ngaba ufuna isibonelelo esisisityebi kunye nesiphakamiso senkcazelo yeemveliso ezidumileyo kunye nabavelisi?
Namhlanje abantu banokuqwalasela ingqalelo nje ekuhleni kwabo, kodwa ngaphezu kwayo yonke into, ukuya kumhlalaphantsi. Abantu abaninzi bayazi ukuba ziziphi iimpahla ezizithengayo kwaye zihlobo luni zembatho abazigqoka ngokungaqhelekanga okanye ukusebenza, isikolo okanye iintlanganiso zezoshishino. Ukuze sikwazi ukuhlangabezana nokulindela kwabathengi bethu abafuna ukugqoka kwiimfashini, iimpahla ezintle kwiimveliso zehlabathi, senze ivenkile yesimanje kwaye isebenzayo ngeempendulo.
Unokufumana kuyo impendulo ethandwayo kakhulu yezicathulo, iimpahla kunye neengxowa, kodwa isipho sethu sininzi kakhulu. Siphinde sinikezele ngokuphindaphindiweyo kweengxowa, ukuphindaphinda kwezinto ezimhlophe kunye nokubukela; zonke ezibonakaliswe ngumbonakaliso wesitayela, ubukeka obuhle kwaye zenziwe zixhobo eziphezulu. Ukunyamekela ngemigangatho ephakamileyo yokunikezelwa kweempendulo kusenza sizithengise kuphela iimveliso ezinokuthenjwa kunye nokuvavanywa, okungeyona nto ingayisebenzisiyo kwiimvelaphi zokuqala, kwaye ngaphandle koko, zincinci kakhulu kubo.
Ukuba unomdla kwi-initiative yethu kwaye ungathanda ukutyelela ivenkile yobuchwephesha kunye neentlonelo ezinokuziphindaphinda ngezicathulo, iimpahla okanye ubucwebe, simema ukuba uvakashele iwebhusayithi yethu https://get2lux.cn/en/
Kwabanye abazange bakwazi ukukho, ngelixa abanye bengenakucinga ukuba bashiye ikhaya ngaphandle kwabo, ngakumbi kwimozulu yelanga. Izibuko zelanga zikho enye yezona zinto zibalulekileyo ezibalulekileyo esizigqokayo - ezikufutshane kunye nezikhonkwane okanye ubucwebe. Sagqiba ekubeni siphume ngokuchasene nezilwanyana zamaPolesi kwaye senze ivenkile kunye nezixhobo zokukhanya kwimizi yamachiza eyaziwayo, ngokuyinhloko nguRay Ban, iVercece kunye neGucci.
Iimpendulo ziphantse zichazwe kwizinto ezivela kuqala-ngokuphathelele iziboniso, apho ukungafani kungabonakali, kunye nemiba yobugcisa, ngoko uhlobo kunye nemigangatho yezixhobo ezisetyenziselwa ukuzenza. Kungenxa yoko, xa uthengisa ukuphinda izilwanyana zokubukela izilwanyana, okanye uPrada, uLouis Vuitoon, okanye uCloe, ufumana imveliso elinganayo neyokuqala kuyo yonke into. Ngohlobo olulodwa nje - lubiza kakhulu, lufumaneka lula, kwaye lulula kwi-wallet kunye nekhono lomsebenzisi wasePoland oqhelekileyo.
Kwintengiso yesitolo sethu, unokufumana, phakathi kwezinye, i-replica yeBvlgari ethandwa kakhulu, imizekelo evela kwi-LV okanye eCeline
Isikhwama sikhwameni siyaziwa ngokuba yi-accessory efunekayo yabasetyhini ukususela kwi-5 leminyaka BC. Namhlanje, ngaphezu kwamawaka amabini amahlanu namakhulu amahlanu kamva, lidlala indima ebalulekileyo. Abafazi, nangona kunjalo, abagcini kuphela ukuphatha iipokethi zangaphambili, kodwa bafikelela kwiingxelo zezikhwabanzi ezivela kwiindawo eziziwayo kunye namaxabiso athengisekayo kwihlabathi jikelele. Isizathu siyacaca: intengo ephantsi yokulingana komgangatho.
Ezinye zezinto ezidumileyo kwiintombi zasePoland zivela kubaqulunqi abanjengoLouis Vuitton, uBurberry kunye neYLS, kodwa iimpendulo zamaKristu uLouboutin, iimpawu zeDiore kunye neCloe ziba nomdla omkhulu. Abafazi basePoland banomdla wokukhetha imodeli eyaziwayo eUnited States okanye baye baqala ukubonga ngokuphakanyiswa yiinkwenkwezi ze-Hollywood, izidumi zezemidlalo kunye nezopolitiki. Isibonelelo sethu siquka iimpendulo zeemali ezivela kwezinye iimveliso; iquka imodeli evela eHermes, eGucci, Prada, Chanel, eCeline, kwaye kungekudala i-offer inikezelwa ngumzobo we-handino ye-Valentino.
Ukuba ufuna ukwazi imizekelo engaphezulu, nceda u tyelele iwebhusayithi yethu https://get2lux.cn/en/119-handbags Akulungele ukuthenga i-wallet efanelekileyo, eya kubakho ukuzinza kwezinto eziphathekayo, umzekelo oyingqayizivele, ukubonakala okwehlukile kwaye, ngexesha elifanayo, xabiso elithengekayo. Zonke ezo mpawu zifumaneka kwiimpawu zeebhanti zamakhredithi awaziwayo esinikela kwisitolo sethu. I-replica ayifani ngokungafaniyo neyokuqala kwayo; zombini ekunqunywe, ukupolisa, ubukhulu, kunye nezinto ezizodwa, zihambelana nomlingane wazo ofumaneka kwii-boutiques ezidumile. Kwaye akunakunceda ukuba i-Louis Vuitton, i-Chanel okanye i-Celine isikhwama-ngasinye sichazwe ngumgangatho ophezulu wezinto ezenziweyo kunye nesiqinisekiso sokwaneliseka kwicala lethu. Iimpendulo zengcamango ecacileyo kwixabiso elingabizi, kodwa elikhethekileyo nelinenhle kwi-boss okanye osebenza nabo, kwaye ngokufanayo bazalisekisa umsebenzi wabo osebenzayo kwiminyaka emininzi yokusetyenziswa ngokuqhubekayo. Isibonelelo sethu siphezulu kakhulu: sinezo zombini ze-Gucci iipilisi kunye nemizekelo evela kwiBurberry, iYSL kunye nezikhwama ezidume kakhulu zeChristian Louboutin.
Akulungele ukuthenga i-wallet efanelekileyo, eya kubakho ukuzinza kwezinto eziphathekayo, umzekelo oyingqayizivele, ukubonakala okwehlukile kwaye, ngexesha elifanayo, xabiso elithengekayo. Zonke ezo mpawu zifumaneka kwiimpawu zeebhanti zamakhredithi awaziwayo esinikela kwisitolo sethu.
I-replica ayifani ngokungafaniyo neyokuqala kwayo; zombini ekunqunywe, ukupolisa, ubukhulu, kunye nezinto ezizodwa, zihambelana nomlingane wazo ofumaneka kwii-boutiques ezidumile. Kwaye akunakunceda ukuba i-Louis Vuitton, i-Chanel okanye i-Celine isikhwama-ngasinye sichazwe ngumgangatho ophezulu wezinto ezenziweyo kunye nesiqinisekiso sokwaneliseka kwicala lethu. Iimpendulo zengcamango ecacileyo kwixabiso elingabizi, kodwa elikhethekileyo nelinenhle kwi-boss okanye osebenza nabo, kwaye ngokufanayo bazalisekisa umsebenzi wabo osebenzayo kwiminyaka emininzi yokusetyenziswa ngokuqhubekayo.
Isibonelelo sethu siphezulu kakhulu: sinezo zombini ze-Gucci iipilisi kunye nemizekelo evela kwiBurberry, iYSL kunye nezikhwama ezidume kakhulu zeChristian Louboutin.
Ukuba uye wakha waphupha ngokugqoka izicathulo ezintle kunye neziphathekayo ezigqithwe ngabantu abadumileyo, iinkwenkwezi kunye nabadumiweyo behlabathi lonke, kwaye ngexesha elifanayo musa ukuphazamiseka xa uthengela iimpahla ezinjalo, ngoko isitolo sethu sisisombululo esiphezulu kwiinkxalabo zakho. . I-replica kaLouis Vuitton, iGucci, Dior, Yeezy, Converse Coca & Cola, iCawa, uMnumzana uLouboutin kunye nezinye iimveliso zisezona zizathu ze-assortment yethu, encediswa ngabaqulunqi be-niche.
Zonke izicathulo ze-YLS izicathulo, ezithengiswa kwivenkile, u-Isabel Marant okanye izicathulo zeHermes zikhethiweyo ezikhethwe ngokucophelela kwiikholeji zehlabathi ezikhoyo kwimarike; imodeli ebonakalisiweyo, ephathekayo neyintandokazi eye yazuza abaxhasayo emhlabeni wonke kwaye kufuneka ikopi yayo kuyo yonke ikhabethe ye-Pole yangoku.
Khangela i-esitolo sethu kunye nezicathulo ze-Dior izicathulo, i-Chanel ne-Gucci izihlangu kwi-https: //get2lux.cn/en/113-boots
unxibelelwano - siqinisekisa amanani entle, ukuhanjiswa ngokukhawuleza kunye neemeko ezicacileyo zentengiso. Ukuthenga iimpendulo zeengubo zithuba elikhethekileyo kubantu abafuna ukubukeka befestile kwaye banamhlanje, kwaye ngexesha elifanayo baxabisa ukuthuthuzelwa kokuhamba kunye nokuphakama okuqinisekisiwe nezicathulo ezivela kwii-shelves eziphezulu.
Xa usenza isigqibo sokuthenga iimpahla zokuphindaphinda, kuyafaneleka ukuba ukwazi ukuba yiyiphi imveliso kunye nabayili bempahla abafake imfashini ngexesha langoku, ngubani "ogqithiseleyo" kwaye unengubo yakhe engcono ukuhlehlisa ixesha elihle. Iimveliso esinikezelayo zifashini, zanamhlanje kwaye ziyahambelana nemimiselo yangoku. Ezi zizinto ezinje zifana neGucci replica, Chanel, Dolce & Gabbana, Hermes kunye neYSL, nangona isibonelelo sisonke siqhubeka kwaye siquka iimpahla zabakhiqizi abangaziwa.
Xa uthengela iingubo zeempahla kumthengisi othembekileyo, unokuqiniseka ukuba uya kufumana umkhiqizo oye wavavanywa, uqinisekisiwe kwaye uvela kumthombo wezomthetho ongahambisani nemfuno yomenzi wangaphambili. Izambatho ezikhoyo kwisibonelelo sethu, oko kukuthi i-Chanel, i-Burberry okanye i-Balenciaga yile mveliso: ayibonakali nje ibalulekileyo, ayigcinanga kuphela, kodwa ikwafaka ubungqina kwisitayela kunye neklasi yomnini wabo. Le yindlela epheleleyo yezinto ezivela kwixabiso eliqhelekileyo, kungekhona nje ukuba lifikeleleke kwi-pocket eqhelekileyo, kodwa ngokuqhelekileyo ayifumanekanga kwimakethe yasePoland nasePoland ezitolo.
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa malunga nokunikezelwa kweempahla zengubo, nceda u tyelele
Uhlobo lweentengiso ezikhoyo kwiimakethe zobungcweti zenza ukhetho phakathi kwamanqaku athile kunokuba lula, kodwa kuphela ukuba siyazi into esiyifunayo kwaye luhlobo luni lomvalo okanye intsimbi esiyifunayo. Kungekudala, ePoland, iimpendulo zeempahla ezidumileyo, zisayinwe ngamagama awaziwayo njengeChanel, iDoror, iTiffany okanye iLouis Vuitton ziye zatshintsha.
Yiyo kanye uhlobo lobucwebe oza kulufumana kwivenkile yethu-ekhethekileyo, yangoku, enhle, kunye nexabiso elibalaseleyo lexabiso lemali. Ukuba ufuna ukuqiniseka ukuba uphawu lweChanel oluthengiweyo luya kusebenza iminyaka emininzi, aluyi kutshabalalisa, aluyi kukhangela, kwaye luya kuhlala lukhanya kuzo zonke iimeko - khetha ukwenziwa kwethu.
Ifumaneka kwisibonelelo esibanzi, iimpendulo zeempahla zeLouis Vuitton, iCartier okanye iHermes ziyimveliso yeklasi ephezulu, eyenzelwe kwaye yenziwe ngabantu abaxabisa imfashini, ukubukeka okuntle kunye nodumo olufana neendwanguzo eziqinisekisa ngethuba leentlanganiso zezoshishino okanye zoluntu, kunye negosa zihlandlo.
Ungalindi ixesha elide, jonga kwi-esitolo sethu ngoku
Nangona iilindi zokubukela zangasese zikhutshwe ngokukhawuleza ngaphandle kokusebenzisa iifowuni zefowuni, kusekho abantu abaninzi abanxiba ngokugqithiseleyo umlindo kwizandla zabo. Ngokukodwa iimodeli ezibonakaliswe ngabakhiqizi abaziwayo kunye namaxabiso awaziwayo. Awudingi ukuthenga iimpawu zokuqala ukuze ujabulele umgangatho wazo; ziyafaniswa ngokuphindaphinda, kodwa kuphela xa zenziwa ngezinto ezifanelekileyo kunye nokugcina umgangatho ophezulu, ukuze bahluke ngokubonakalayo kwi-archetypes yangempela.
Ukuba ukhangeleka kwisitoreji sethu sokubukela, uza kufumana isipho esilukileyo kunye ngokuchanekileyo sokulinda wonke umntu, kwaye nakwixesha elifanelekileyo. Amanani atyebileyo enza ukuba yethu inikezelo ifikeleleke kubo bonke abathengi, kungakhathaliseki ubunzulu beepokotshi okanye amakhadi esikwereti. Enye yezilingo eziphambili kunye nezithandwayo ezithengwa ngabathengi yi-Emporio Armani, eyaziwa ngqalelo kwincinci encinane ekupheleni kwayo.
Siyakumema ukuba uqhelane nesiphumo sethu esipheleleyo kwiwebhusayithi https://get2lux.cn/en/127-watches